အချစ်က ထမင်းမကျွေးဘူး ဆိုတဲ့ (၂၁) ရာစုမိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟ၀င်ခံချက်။ (သိပ်ကို ကောင်းလွန်းတဲ့ စာလေးပါ)။ - Grand Parents-Day
Home / Knowledge / အချစ်က ထမင်းမကျွေးဘူး ဆိုတဲ့ (၂၁) ရာစုမိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟ၀င်ခံချက်။ (သိပ်ကို ကောင်းလွန်းတဲ့ စာလေးပါ)။
အချစ်က ထမင်းမကျွေးဘူး ဆိုတဲ့ (၂၁) ရာစုမိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟ၀င်ခံချက်။ (သိပ်ကို ကောင်းလွန်းတဲ့ စာလေးပါ)။
ကျမချစ်သူကို ပြောခဲ့ဖူးတယ် ။ နောက် ၂နှစ်လောက်နေရင် ငါလက်ထပ်ဖြစ်လိမ့်မယ် ။ဒါပေမယ့် ငါလက်ထပ်တဲ့သူက နင်ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်လိမ့် မယ် ။နောက် ၂နှစ်လောက်နေရင် အဆင်ပြေတဲ့သူကို ငါ လက်ထပ်သွားမှာပဲလို့….။ကြားကြားချင်းတော့ သူစိတ်ဆိုးတယ် ။ နောက်တော့ သူ လက်ခံသွားတယ် ။
ကျမဆိုလိုတာက မိန်းမတစ်ယောက် လက်ထပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါ ….အချစ်က အဓိကမကျတော့ဘူး | ကိုယ်ချစ်တဲ့သူဆိုရင် တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့ ။ဒီလူကို တစ်သက်လုံးအားကိုးရတော့မှာ တစ်သက်တာ မှီခိုရတော့မှာမဟုတ်လား ။အချစ်က ထမင်းမကျွေးဘူး ။ ကိုယ် ထမင်းအငတ်ခံနိုင် တယ်ထား ကိုယ့်ရင်သွေးလေးတွေကို ပြည့်စုံအောင် ဖန်တီးဖြည့်စွမ်းချင်တယ် ။
ကိုယ့်ကလေးကို သူများထက် အောက်မကျစေချင်ဘူး !!နောက်တစ်ခုက မိဘ , မိဘစိတ်ပူရတဲ့သားသမီး မဖြစ် ချင်ဘူး ။ငွေဆိုတာ ဒုတိယဘုရားသခင်လို့ခံယူထားတယ် !!ကိုယ့် မိသားစုအတွက် ပြည့်စုံအောင်ရှာဖွေပေးနိုင်တဲ့ ယောက်ျားကိုယူထားမှ စီးပွားရေးမပူပန်ရဘဲ ကိုယ့် သားသမီး ကိုယ့်မိသားစုအတွက်နွေးထွေးမှု အပြည့်အဝပေးနိုင်မှာလို့ပဲ ခံယူထားတယ် ။
ဒီအတွက် ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ် ကိုယ့် ချစ်သူနဲ့ တစ်သက်လုံး အတူနေချင်တယ်ဆိုရင်ချစ်သူကအားကိုးလောက်တဲ့ အရည်အချင်း | ယုံကြည် လောက်တဲ့ စွမ်းရည်ရှိအောင် ကြိုးစားပေါ့ !!တစ်သက်လုံး တစ်နှစ်စောင့်လည်း ကြိုးစားနေတယ် ဆိုတဲ့ အဆင့်ကတက်မလာ | နှစ်နှစ်စောင့်လည်း စုဆောင်းမှုက နတ္ထိ ….
မျက်နှာလေးလာဖူးရတဲ့ဘဝမှာ ပျော်နေရုံနဲ့တော့ တစ်သက်နီးမှာ မဟုတ်ဘူး ။မိန်းမတစ်ယောက်အနေနဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ကိုရွေးချယ် တဲ့နေရာမှာ ….သစ္စာရှိမှာလား , ကြင်နာတတ်လား , နွေးထွေးတတ်လား ဆိုတာတွေအပြင် အားကိုးရမှာလားဆိုတဲ့အချက်ကိုပါ ထည့်တွက်မှာ အသေအချာပဲ ။ဒုံရင်း ဒုံရင်း မျက်နှာမော်ဖူးမယ့်ဘဝ ရတဲ့လစာလေးကို ချစ်သူနဲ့မုန့်စားရတဲ့ ဘောနပ်စ်လေးကို ချစ်သူနဲ့ လျှောက်ဖြုန်းနေတဲ့ အဆင့်နဲ့ မှန်းလို့ကတော့ တစ်နေ့ ကျန်ရစ်ဖြစ်မှာပဲ ။
ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း ကိုယ်ညံ့လို့ အားကိုးထိုက်တဲ့ယောက်ျားဆီ ပါသွားတယ်လို့ပဲ ယူဆလိုက်တော့ !!ယောက်ျားဆိုတာ မိန်းမမယူခင်တည်းက စီးတဲ့ ရေ | ဆည်တဲ့ ကန်သင်းမူကို ကျင့်ရမှာပဲမဟုတ်လား …. ။ခရက်ဒစ် – Tha Zin Ko Ko